Kedu esi eji stencil maka mbọ - maka ikuku, imepụta, eserese, monogram
A na-emeziwanye nkà na ụzụ nkà na uzu ụwa n'oge niile, site n'enyemaka nke a na-emepụta nhọrọ dịgasị iche iche nke nhọrọ maka oge ọ bụla. Ya mere, mgbe mgbe, ndị ọkachamara nke nkà na-eji aka eme ihe na-eji nkwụ pụrụ iche maka mbọ, nke na-enye gị ohere ịmepụta ezigbo ihe.
Akpụkpọ ụkwụ maka ịkpụ aka
Ogwe ndị pụrụ iche maka imepụta mbọ dị iche iche na-egosipụta ọkwa ma ọ bụ ụdị dị iche iche na-adabere na ha iji mepụta ihe zuru okè na nke zuru okè. Ngwaọrụ ndị a na-akwalite ọrụ nke nna ukwu ahụ ma nwee ike belata oge eji na usoro ahụ.
N'otu oge ahụ, ihe ọ bụla na-apụta mgbe nile - ihe ndị dị mkpa na ihe oyiyi nke onyinyo ahụ bụ ihe zuru oke ọbụna, aka aka ndị mara mma na-ejiji mma ma dị mma. A na-enye ntuhie maka mbọ taa taa. Onye ọ bụla dịgasị iche iche nwere uru ya ma ọ bụrụ na o jiri ya tụnyere ndị ọzọ, ya mere, ndị ọkachamara na ndị nwere ahụmahụ nke ịkpụcha mbọ aka na nke ọ bụla na-ahọrọ ihe nlereanya kachasị mma.
Akpụkpọ ụkwụ vinyl maka mbọ
Otu n'ime ihe kachasị ewu ewu ma na-ejikarị arụ ọrụ bụ stencil vinyl maka ịbịaru mbọ. N'oge ojiji, agbasa nke varnish ma ọ bụ gel-varnish kpam kpam, n'ihi ya, nwa agbọghọ ọ bụla nwere ike iji mkpuchi ọ bụla nke ndò ọ bụla kpuchie ya.
Tụkwasị na nke ahụ, a na-ahụ ihe nkedo maka ihe osise si na vinyl dị iche iche site n'ụdị ụdị dịgasị iche na iche iche, ike na ọganihu dị ukwuu. Ọnụahịa nke mmegharị nke ọdịdị a dị ala, ya mere ọ nwere ike inweta ya site n'aka ndị nna ukwu na ndị inyom nkịtị. N'otu oge ahụ, ndị na-ahụ n'anya ga-enwe obi ụtọ na ntụziaka zuru ezu dị na nke ọ bụla.
Akpụkpọ ụkwụ na-emegharị maka mbọ
Ahịa, plastik ma ọ bụ stencil silicone maka mbọ, nke nwere ike iji ọtụtụ ugboro na esepu, bụ ihe plastik na ụkpụrụ. N'okwu a, a na-eji ihe oyiyi ahụ na-etinye ihe oyiyi ahụ na-eji stampụ pụrụ iche. Ntughari a na-emegharị oge maka mbọ nwere ike ịdịru ogologo oge, ya mere, ego ndị ọzọ iji nweta mgbanwe ndị dị mkpa adịghị ebili ọbụna n'ihi na ndị nna ha na-etinye aka na ịkpụ aka na ntaneti ọrụ.
Usoro nke ịmepụta eserese na enyemaka nke ndekọ ndị dị otú ahụ adịghị mgbagwoju anya, Otú ọ dị, ọ chọrọ nkà ụfọdụ. Ya mere, iji mepụta mkpịsị nkedi mara mma na nke mbụ na stencil ndị e mere iji mee ihe ugboro ugboro, ọ dị mkpa itinye varnish ma ọ bụ gel-varnish na efere ahụ, wee wepụ ya na njiri mmiri dị nro. Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-ebute ihe osise ahụ na stampụ site na ịpị ya na ihe ụfọdụ nke usoro ahụ, wee jiri otu stampụ ahụ bipụta ya.
Ntughari-ntughari maka mbọ
Ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe dị iche iche, ọ bụghị mgbe niile ka ha mara na ha nwere ihe nkwekọ pụrụ iche, kama ịbụ ihe osise mara mma ma dị mma, tinye ya na ahịhịa.
Ihe nkedo nke ihe ntanetị nwere ọtụtụ uru ma e jiri ya tụnyere ụdị ndị ọzọ yiri ngwaọrụ, dịka ọmụmaatụ:
adabara maka ndị na-amalite ma ọ dịghị achọ ọkachamara pụrụ iche maka ngwa;
Egbula ma ghara ịrapagidesi ike n'oge ọrụ, nke na-ewepụ ohere nke mbibi mberede na mgbanwe dị mkpa;
dị nnọọ ọnụ ala, n'ihi ya, ha dị oke maka mmekọahụ niile;
na-etinye na nnukwu mkpokọta - nwere ike inwe agba, ụdị na ụdị;
kwadoro maka mkpuchi ọ bụla.
Kedu ka esi eji ncha maka ntu?
Ajụjụ banyere otu esi eji stencil maka mbọ nwere ike ibili na fashionista mgbe eji ụdị ọ bụla a. Ka ọ dị ugbu a, n'ọtụtụ ọnọdụ, nsogbu na-ebili mgbe ị na-ezo aka na ntanetị. Iji teknụzụ a, ịkwesiri ịzụta ọtụtụ ngwaọrụ pụrụ iche, dịka:
a diski nke mkpụrụ metal na volumetric oyiyi etinyere ya;
ihe nchapu, ma ọ bụ ihe nchacha, iji wepụ ihe ndị na-egbuke egbuke na-ada n'elu ụlọ ọrụ ahụ;
akara stampụ maka iburu ihe oyiyi kpọmkwem na teepu ntu;
ọkachamara dị iche iche nke na-anọgidesi ike.
N'iji ihe niile dị mkpa na ngwaọrụ, ọ dị mfe iji aka mma. Ka o sina dị, iji nweta ezigbo ihe, ị kwesịrị iji nlezianya na-agbaso ntụziaka ndị enyere:
Na mbido, dị ka o kwere mee, hichaa ihe ndị ahụ ma wepụ ihe fọdụrụ n'ime mkpuchi ndị dị na mbụ.
Jiri nwayọ tinye efere ahụ, nye ha ọdịdị na degrease chọrọ.
N'iji varnish mara mma, jupụta foto ahụ na diski ahụ, wee wepụ ụcha mmiri.
Ịpị ọkụ na-egbuke egbuke, metụ rubber ịnwụ na ebu ma nakọta agba na stampụ.
Site n'igbu aka, pịa ihe oyiyi ahu megide ncha akwa ma wepu ya ozugbo.
Chere maka ihicha ikpeazụ nke ụkpụrụ.
Mgbe nke ahụ gasị, tinye ihe mkpuchi doro anya na onyinyo ahụ, nke ga-ekwe ka mkpuchi na imewe dịrị ogologo oge o kwere mee.
Ntughari echiche na ube
Teknụzụ nke oge a na-enye gị ohere ịmepụta ihe oyiyi na-egbukepụ egbukepụ egbukepụ na ntanye, nke nwanyị na nwa agbọghọ ọ bụla nwere ike igosi ụdị onwe ha na àgwà pụrụ iche. Ihe kachasị mma ma dị mma bụ atụmatụ, nke a na-ejikarị edozi ma bụrụ nha nhata.
Iji mee ọmarịcha mma, nke na-enweghị atụ, ọ ga-ekwe omume na enyemaka nke mmegharị pụrụ iche. Dịka ọmụmaatụ, stencil maka ikpuchi ntu na-enyere aka ịmepụta ihe ndị a chọrọ na njirika ma hụ ihe niile dị mkpa. Akụkụ nke ụdị ma ọ bụ ihe oyiyi na nke a ekwesịghị ịbụ ihe doro anya, ọ bụ ezie na mgbe itinye nhazi geometric na ihe ndị yiri ya, nke a dị mkpa.
Akpụcha nke French na stencil
Ogwe ndị pụrụ iche maka ịkpụ aka nke French na-eme ka ọ nwee ike ịmata ọdịiche nke akara ọchị na klọb ọ bụla dị nnọọ otu. Ya mere, ọmarịcha mma nke na-adịghị mma ọ bụla na-eme ka ihe ọ bụla na-agbanwe ma ọ bụ obosara nke oghere na-enweghị isi, na ngwaọrụ a na-enyere aka izere ụdị nsogbu ahụ.
Akpanaka maka mbọ, iji mee ka ọkpụkpụ French, nwere ike ọ bụghị naanị kpochapụwo na nke zuru oke ọbụna, kamakwa ọkara, okirikiri ma ọ bụ ọbụna ntụrụndụ. N'okwu ikpe a, enwere ike ịchọta ihe eji emepụta stampụ ndị a, gbaa akwa ma ọ bụ lace, ya mere, site n'enyemaka ha, ị nwere ike ịmepụta ihe dị iche iche na-enweghị atụ ma dị iche iche maka ikpe pụrụ iche. Dịka ọmụmaatụ, usoro a nwere ike iji ohere nke ndị na-eto eto na-eto eto na-eche echiche ịkwado ụda ha n'ehihie nke ụbọchị kacha mkpa ma dị mkpa.
Were aka na monograms na stencil
Ịmepụta ihe osise dị mma na nke ornate na-egbuke egbuke bụ ihe siri ike. Ọbụna ndị ọkachamara nwere ahụike na-anaghị adị mfe ịnagide ọrụ a mgbe nile, ya mere ndi nmalite na-eme ka ndụ ha dịkwuo mfe, na-eji eriri pụrụ iche maka monograms na mbọ. Ọ nwere ike iyi ngwá ọrụ stampụ ma ọ bụ ihe ntanetị.
Ọkpụkpụ na-egbuke egbuke na ncha
A na-ejikwa ụbụrụ na-eme ka a na-ahụ maka nri ehihie na-ejikarị eme ihe, ma site na ndị inyom na-amalite ime ihe na ndị ọkachamara nwere ahụmahụ dị ukwuu. Mgbe ị na-ekepụta ihe a, ọ dị mkpa ka ịchọta oghere nke otu nha na ọkpụrụkpụ, ya mere mgbanwe ndị pụrụ iche na-enye aka rụọ ọrụ a. A na-enyocha ntutu maka ịmepụta ihe na ngwongwo ndị na-agụnye ọnwa ọnwa, ma, a na-ahụkwa ụdị dị iche iche.
Mkpụrụ aka nke volumetric na nkedo
Ikwenye maka mbọ nsị nwere ike ịbụ oke ọkụ. Jiri ha dị mfe nghọta - iji mee nke a, ọ dị mkpa iji kpoo ihe nkwụnye ahụ na ihe a chọrọ ka ọ bụrụ ebe kwesịrị ekwesị, ma tinyezie mkpuchi kwesịrị ekwesị n'elu ya. Dị ka a na-achị, mgbe iji ngwaọrụ dị otú ahụ eme ihe, akụkụ ahụ na-esite na varnish ma ọ bụ gel-varnish kpughere agba dị iche iche, Otú ọ dị, n'ọnọdụ ụfọdụ, ọ nwere ike ikwekọ n'ụzọ zuru ezu na ụda olu nke n'elu efere.
Mkpụrụ aka - "geometry" na stencil
N'ọnọdụ ụfọdụ, mkpịsị aka na mbọ maka mbọ aka dị mkpa iji mee ka ahịrịokwu ahụ zuru oke ma otu n'ime oke. Nuanwa a dị ezigbo mkpa n'ịmepụta atụmatụ nke geometric nke na-adọta ụmụ agbọghọ na ụmụ nwanyị na nghọta na ịdị ọcha ha. Ojiji nke ngwaọrụ dị otú ahụ na ngwa ngwa na eserese dị iche iche na-echekwa oge, ma maka fashionistas na ndị nna-ukwu nke nkà ịkpụ aka, ma nwee ike ịkwado usoro ọrụ.
Nyocha imecha na nkedo
Akpanaka mbido maka nkedo nkedo miri emi pụtara na ụwa nke ịkpụcha mbọ aka n'oge na-adịghị anya gara aga, mana enweelarịrị mmasapụ na-enweghị atụ n'etiti ụmụ agbọghọ na ụmụ nwanyị. Jiri mmegharị a dị nnọọ mfe, n'ihi ya, ha na-eji ya ọbụna site n'aka ndị inyom na-enweghị uche na ejiji. Mepụta mkpịsị aka site na iji eriri ime ihe dị iche iche n'ụzọ abụọ:
echiche na-ezighị ezi na enweghị efu;
nhọrọ na agba ma ọ bụ volumetric ụkpụrụ.
Site n'enyemaka nke ụzọ abụọ ndị a, i nwere ike itinye ihe osise na-egbukepụ egbuke egbuke, mara mma na nke mbụ, nke ga-ahapụ onye ị hụrụ. Ha na-ewu ewu karịsịa n'etiti ụmụ agbọghọ ndị na-achọghị ịmepụta oge dị ukwuu iji dozie esemokwu ha, ma ha na-enwe mmetụta dị ukwuu n'àgwà ha ma chọọ ime mgbanwe n'ọnọdụ onyinyo ha.
Na-ese henna na ahụ
Ebube Ndị Na-acha Egwu 2013
Ejiji manicure - oge oyi-oyi 2015-2016
New na manicure 2015
Uwe - oge nke afọ 2015-2016
Uwe ọkpọkorita mmiri na-asọ oyi-okpomọkụ 2013
Aka nri site n'oké osimiri
Ihe eji eme ihe eji eme ihe 2014
Uwe Uwe Uhie Uhie 2013
Nchịkọta oge nchịkọta nke Mee-elu Guerlain 2015
Ihi ụra na ihe ha pụtara
Uwe ụmụ nwanyị maka oyi
Mụ na Robbie Williams na nwunye ya, e boro ebubo nke iyi ọha egwu
Ọka n'etiti mkpịsị ụkwụ
Mycoplasmosis na ime
Mma ụlọ mma nke loggia
Ọgwụgwọ nke gastritis - ọgwụ ọjọọ eme ihe
Ngwongwo ndi mmadu maka oghere azu na ihu
Kedu esi ewepụ ntutu isi n'ụlọ kpamkpam?
Esi ewepu chocolate?
Akwụkwọ nri - na-eto site na osisi
Jam na-enweghị shuga
Mmiri ahụ na-amalite na Hungary
Lentil ofe - uzommeputa
Kedu ka foto ahụ dị na paspọtụ mara mma?
Ndị ọrụ mmanu - esi eji ya eme ihe?